Izikhukhula namagundane ziletha izigcawu eziseBhayibhelini e-Australia | Scrolla Izindaba
Izikhukhula namagundane ziletha izigcawu eziseBhayibhelini e-Australia
Imigwaqo igcwele izikhukhula, kucwile emakhaya kanti abantu bakwazile ukuhamba ngezinyawo emigwaqweni ngemuva kwemvula enamandla ehlasele izingxenye ezithile zase-Australia ngesonto eledlule.
Izikhukhula ezenzeka “kanye eminyakeni eyikhulu” ziholele ekutheni uhulumeni wase-Australia amemezele inhlekelele engokwemvelo ezindaweni ezinkulu e-New South Wales, njengoba izimvula ezinamandla zidalela izwe udoti futhi ziphoqa izinkulungwane zabantu ukuba bathuthe.
Izikhulu zikhiphe imiyalo yokukhishwa ezindaweni eziyisishiyagalolunye, okungenzeka izikhukhula zilandele ngazo.
I-Sky News ibike ngoMgqibelo ukuthi zingaphezulu kweziyi-4 000 izingcingo eziphuthumayo ezenziwe ngabantu abadinga ukutakulwa ezikhukhuleni kodwa akukabikwa muntu oshile.
Kodwa-ke, uNgqongqoshe Wezimo Eziphuthumayo wase-New South Wales uDavid Elliott uthe esithangamini nabezindaba ngeSonto, “sisondela kakhulu kulokhu kufa okungenakugwemeka.”
Ngesikhathi lapho indlu yezithandani ikhukhuleka khona eduze nase-Sydney, isigameko saqoshwa kwividiyo. Omakhelwane baqopha ikotishi likhukhuleka ngosuku okwakufanele ngabe lezi zithandani zishada ngalo.
Khonamanjalo, izinkulungwane zamagundane zigcwele idolobha elise-south-east Australia.
Lezi zinkumbi zamagundwane sezithathe idolobha elincane lase-Gilgandra, nalo elise-New South Wales, futhi abantu bendawo bathi bayaqala ukungenelwa amagundane amaningi kangaka eminyakeni engamashumi edlule.
Umthombo wevidiyo: @jackiefox_
Umthombo wesithombe: @RedCrossAU